people Nepal » आजको राशिफल : असोज २२ गते / अक्टोबर ८ तारिख आईतबार आजको राशिफल : असोज २२ गते / अक्टोबर ८ तारिख आईतबार – people Nepal
आजको राशिफल : असोज २२ गते / अक्टोबर ८ तारिख आईतबार
Posted on October 8, 2017 by Durga Panta
आज श्री शाके १९३९ बि. स. २०७४ साल आश्विन २२ गते आईतबार इश्वी सन २०१७ अक्टोबर ८ तारीख कार्तिक कृष्ण पक्ष तृतीया तिथी चन्दमा मेष राशिमा सूर्य दक्षीणायन शरद ऋतु –
यात्रा मनोरन्जन पुर्ण रहनाले मन प्रशन्न रहला । दाम्पत्य सम्बन्ध उत्तम रहनेछ । साजेदारी काममा हात नहालेकै बेस हुने छ । मनमा आटँ र शाहस को कमिले कार्य सम्पादनमा झन्झट ब्यहोर्नु पर्ला । शारिरिक आलस्यता ले सताउने छ । साधारण चोट पटक लाग्न सक्ने सम्भाबना रहेको छ ।
मनोबिलासिताका सामानहरुमा सामान्य खर्चहुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । कार्यसम्पादनमा झन्झट हुनाले मनमा खिन्नता बोध हुनेछ । नयाँ योजनाका साथमा गरीएका कामहरु सफल हुनेछन । खराब संंगतको कारणले कार्य क्षेत्रमा सामान्य झन्जट ब्यर्होनु पर्ला । सरसामान हराउन सक्ला ।
नयाँ मित्र सगँको भेट वा प्रिय खबरले मन प्रशन्न रहनेछ । तपाईको सानो कमजोरीको फाईदा अरुले लिन सक्ने छन् । बाणिमा मधुरता छाउनेछ । नयाँ कामको थालनिले मन प्रशन्न रहनेछ । मेहेनत र परीश्रम को कदर हुन सक्ने योग रहेको छ । निर्णय गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ ।
आफ्नो कुसलताले गर्दा आम्दानिको क्षेत्र सबल रहने छ । कार्य क्षेत्रको निम्मेबारी थपिनेछ । आफन्त जनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मदत पुग्नेछ । प्रिय खबरले मन प्रशन्न रहनेछ । सभा सम्मेलनमा सरीक हुने अबसर प्राप्त हुनेछ । पारीवारिक सम्बन्धमा सुधार आउनेछ ।
कार्य सम्पादनमा ढीलाई हुनाले सामान्य अप्जस सहनु पर्ला । यात्रा सामान्य झन्झटमय रहन सक्नेछ । मान्यजनको सहयोगमा गरीएका कार्यले दीगो फाईदा दिलाउनेछ । अरुको बसमा गरीएको कार्यले मनमा खिन्नता उत्पन्न हुनेछ । लगानिको क्षेत्रमा सजग रहनु पर्ने दिन रहेको छ ।
तपाईका बाणीको गलत अर्थ लगाउनाले हरुका कारण सामान्य बादबिवादको सम्भावना रहेकोछ । सामान्य चोटपटकको सामना गर्नु पर्न सक्छ । शारीरिक आलस्यातले गर्दा गरीरहेको काम को क्षेत्रमा अपजस सहनु पर्ला । मान्य जनको साथ सहयोग पुर्ण रुपमा प्राप्त नहुनाले मनमा खिन्नता बोध हुनेछ ।
सामान्य कार्यमा अधिक श्रम र समय ब्यतित हुन सक्नेछ । बिलासीताका सामानको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । प्रेमी प्रेमिकाको बिच सामान्य मनमुटाब रहन सक्छ । ब्यापार ब्यवसाय को क्षेत्रमा मध्यम दिन रहेको छ । तपाईले कसैमाथी गरेको बिश्वासमा बिश्वसघात हुन सक्छ ।
मनमा चन्चलताले बास गर्नाले सहि निर्णय गर्न नसकीएला । प्रतिपक्षी हरु सबल रहनाले प्रतिस्पर्दा जन्य कार्यमा सजग रहनु उत्तम रहनेछ । स्वास्थ सम्बन्धि सामान्य असर भोग्नु पर्ला । आजको सामान्य खर्चले भोलिलाई फाईदा मुलक हुनेछ । प्रिय ब्यक्ति को भेटले मन प्रशन्न रहला ।
बौधिक क्षेत्रको बिकाशले तपाईको मान सम्मानमा बृद्यि गर्नेछ । कार्य क्षेत्रको गडबढीले गर्दा मनमा सामान्य डरको बास रहनेछ । बिद्या तथा सन्तान शुख प्राप्ति हुने योग रहेकोछ । सामान्य अप्रिय खबरले मानसिक चिन्ता ब्यहोर्नु पर्ला । साझेदारी कामको आम्दानि भने उत्तम रहनेछ ।
तपाईको प्रगतिमा आरीस गर्ने हरुबाट बच्नु पर्ला । आम्दानि क्षेत्र भने मध्यम रहनेछ । पारीवारिक साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मद्दत पूग्नेछ । परीश्रम अनुरुप फल प्राप्ति नहुनाले मनमा खिन्नता बोध हुनसक्छ । सबारी साधनको प्रयोगमा ध्यान लिनु होला ।
मित्रजनको साथ सहयोग भरपुर प्राप्त रहनेछ । मानसिक चन्चलताले गर्दा कार्य सम्पादनमा सामान्य झन्झट ब्यहोर्नु पर्ला । ब्यापार ब्यवसायको क्षेत्र भने राम्रो रहेको छ । भौतिक स्रोत साधनको प्रयोग मा समय ब्यतित रहन सक्छ । प्रिय खबर द्वारा मन प्रशन्न रहला ।
मित्रहरुको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य खराबि आई पर्न सक्नेछ । साजेदारी काममा लगानी नगरैकै बेश हुनेछ । बोलिको कारण आफन्तजनहरु रुष्ट रहन सक्छन् । कोध्रको कारण मानसीक चिन्ता रहन सक्छ ।
कुबेलाको बाढीले लियो ८८ को ज्यान
आज मुस्लिम समुदायलाई सार्वजनिक बिदा